यसो गर्दा नेपालीमा बोलेका कुरा कम्प्युटरले टाइप गर्छ, पैसा नपर्ने र नयाँ सफ्टवेयर राख्न नपर्ने तरिका – Nepali Tech Blog
अब फेसबुकमा स्टाटस लेख्न पनि टाइप गरिरहन पर्दैन । बोल्यो, कम्प्युटरले टाइप गर्दिन्छ । कपि गर्यो अनि फेसबुकमा पेस्ट गर्यो ।
कुनै समय थियो जुन बेला टाइप गर्न जानेको छु भन्दा गौरवको कुरा हुन्थ्यो, तिनलाई कम्प्युटरका जानकार मानिन्थ्यो । र, टाइप मज्जाले गर्न सक्नेहरु व्यवसायिकरुपमा पनि सफल हुन सक्थे । जमाना फेरियो तर पनि टाइपिङको दुख भने उस्तै छ ।
मैले टाइप गर्न जानेको छु या मज्जाले टाइप गर्न सक्छु भन्नु कम्प्युटरको जानकार हो भन्ने कुराको संकेत होइन तर प्रोग्रामिङ वा अन्य लेखन सम्बन्धी कुराहरु सिक्न टाइपिङको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । ढिलो टाइप गर्नु समयको नाश मात्रै होइन कि अन्य धेरै कुरा सिक्न अफ्ठ्यारो पार्नु पनि हो ।
अझ नेपाली टाइप गर्नु वा सिक्नु भनेको त टाइपिङको पहाड चढ्नु बराबर हो भन्दा पनि हुन्छ । किवोर्ड मै नभएका अक्षर वा संकेतहरु सम्झदै टाइप गर्नु चानचुने कुरा होइन । भलै, टाइप गर्दै जाँदा बिस्तारै हाम्रा औँलाहरुले नै कुन अक्षर वा संकेत कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँछन् र टाइपिङ सजिलो बन्छ तर पनि समय भने लिन्छ नै । अँ, हाम्रो औँलाहरुले नै स्वत: कुन अक्षर वा संकेत के कहाँ छ भनेर टाइप गर्न सक्ने अवस्थालाई नै मांसपेशीको स्मरण वा Muscle Memory भन्छन् सायद ।
अब यो टाइप गर्नु भन्ने कुरा त्यति गाह्रो पनि नहुने भयो । यहाँ म तपाईहरुलाई त्यस्तै जानकारी दिन गइरहेको छु जसमा तपाईले टाइप नगरी बोलेर कम्प्युटरलाई टाइप गराउँन सक्नु हुनेछ । सबै भन्दा राम्रो कुरा के छ भने यसका लागि कुनै थप पैसा तिर्न पर्दैन र अरु कुनै नयाँ सफ्टवेयर पनि थप्न पर्दैन । तपाईसँग केवल गुगल क्रोम भएको कम्प्युटर र इन्टरनेट मात्रै हुन पर्छ ।
भ्वाइस डिक्टेसन (Voice Dictation) को कमाल
बोलेका कुराहरुलाई भ्वाइस डिक्टेसनको सहयोगमा सजिलै अक्षरमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । भन्नुहोला, अंग्रेजी, स्पेनिश वा हिन्दी जस्ता धेरै संख्यामा बोलिने भाषाहरु मात्रै यसले काम गर्छ तर होइन । नेपालीमा पनि यसले गजबको काम गर्छ । नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुन कुन भाषामा यो भ्वाइस डिक्टेसनले काम गर्छ भन्ने थाहा पाउँन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् (लिंक नयाँ ट्याबमा खुल्नेछ) ।
यसमा चिन्ह तथा स्माइलीहरु पनि राख्न सकिन्छ तर ति सबै आदेशहरु भने सबै भाषामा आइसकेका नहुन सक्छन् । जस्तै: नयाँ हरफ सुरु गर्नु पर्ने हुँदा नेपाली भाषा प्रयोग गर्दै गरेकाहरुले पनि न्यू लाइन (New Line) भन्नु पर्ने हुन्छ ।
भ्वाइस डिक्टेसन (Voice Dictation) कसरी प्रयोग गर्ने ?
भ्वाइस डिक्टेसन इन्टरनेटमा आधारित भएर चल्ने भए पनि यसले तपाईले भन्नु भएको डाटा भने इन्टरनेटमा पठाउँदैन जसले गर्दा यसले निकै चाँडो बोलीलाई अक्षरमा रुपान्तरण गर्न सक्छ । सुनसान वा बाहिरी हल्ला नभएको स्थानमा नियमित बोली भन्दा केहि ढिलो बोल्ने हो भने यसले निकै राम्रो परिणाम देखाउँछ ।
भ्वाइस डिक्टेसन प्रयोग गर्ने तरिका
१. सबै भन्दा पहिले गुगल क्रोममा dictation.io खोल्नुहोस् । अहिलेका लागि यहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ ।
२. दाहिने तर्फको ड्रप डाउन मेनुमा बोलेर टाइप गर्ने भाषा छान्नुहोस् । याद गर्नुहोला, जुन भाषा बोल्ने हो, सोही भाषा छानिएको हुन पर्छ ।
३. त्यस पछि माइक्रोफोनको सानो फोटो रहेको ठाउँमा वा Start लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् । याद गर्नुहोला, पहिलो पटक प्रयोग गर्दा भने यो सफ्टवेयरले माइक्रोफोन चलाउँनका लागि अनुमति माग्न सक्छ । कृपया! Allow गर्नुहोस् ।
४. त्यस पछि बोल्न थाल्नुहोस्, यसले टाइप गर्न सुरु गर्छ ।
५. टाइपिङ बन्द गर्नु परेका Stop बटनमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ वा Go to Sleep भन्दा पनि आफै बन्द हुन्छ ।
भ्वाइस डिक्टेसनबाट गर्न सकिने थप कामहरु
बोलेका कुराहरुलाई टाइप गर्ने बाहेक अन्य कुराहरु पनि तपाईले भ्वाइस डिक्टेसनबाट गर्न सक्नु हुन्छ ।
यसमा तपाईले बोलेर टाइप गराएका कुराहरुलाई कपि गर्ने तथा सोझै इन्टरनेटमा राख्ने सुविधा पनि उपलब्ध छ । त्यस्तै, कुनै नेताका भाषणहरु वा त्यस्तै अन्य बोलेका अडियोलाई मोबाइलमा बजाएर यसमा टाइपिङ पनि गराउँन सक्नु हुनेछ ।
अन्त्यमा, आफ्नै कुरा
तपाईलाई यो पोस्ट राम्रो लागेमा कृपया सेयर गर्न कञ्जुस्याइ नगर्नु होला ।
Suresh Khanal January 30, 2018 at 8:28 am
The site appeared fine to dictate english bhu fir nepali it could not type up to themark we could consider it useful. Again, to dictate english Google is much more smart!
Anyway, thanks for the news and interestion info.